Inqubo nenqubo entsha ye-membrane bioreactor MBR-Industry izindaba-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Inqubo nenqubo entsha ye-membrane bioreactor MBR
Isikhathi: 2020-04-16 Hits: 42
I-Mhumbu Bioreactor Reactor (efushanisiwe njenge-MBR) inqubo entsha yokwelashwa ngemfucumfucu enamanzi eyakhiwe ngokuhlukaniswa kwe-membrane nobuchwepheshe bokwelashwa kwebhayoloji.
Kunezinhlobo eziningi zezindwangu, ezihlukaniswe ngokwendlela yokuhlukanisa, kufaka phakathi ama-membranes okuphendula, ama-membrane we-ion wokushintshanisa nolwelwesi olungenayo; ngokohlobo lwama-membranes, kukhona ama-membranes wemvelo (ulwelwesi lwezinto eziphilayo) kanye nama-membranes okwenziwa (ama-membranes e-organic membranes angama -organic); Izinhlobo zokwakheka zihlukaniswa zibe luhlobo oluyicaba, uhlobo lwamashubhu, uhlobo lwomoya kanye nohlobo lwe-fiber oluyize.
Kusukela ngeminyaka yama-1980s, ama-membrane bioreactor athola ukunakwa okwengeziwe futhi aba ngomunye wabacwaningi izindawo zokucwaninga. Njengamanje, lobu buchwepheshe busetshenziswe emazweni angaphezu kweyishumi afana ne-United States, iJalimane, iFrance ne-Egypt, ngesilinganiso esukela ku-6m3 / d kuya ku-13000m3 / d.
Ucwaningo lwaseChina nge-MBR lungaphansi kweminyaka eyishumi, kepha inqubekela phambili iyashesha kakhulu. Ucwaningo lwasekhaya kwi-MBR lungahlukaniswa cishe ngezici eziningana:
(1) Hlola inhlanganisela yezinqubo zokwelapha zemvelo ezahlukahlukene kanye nezitho zokuhlukanisa ulwelwe. Inqubo yokwelashwa yokusabela yokusabela ifinyelela kusuka ku-activated sludge indlela yokuxhumana, indlela ye-biofilm, inqubo ehlanganisiwe ye-benchtop kanye nenhlanganisela yesigaba ezimbili se-activated sludge kanye ne-biofilm Anaerobic process;
(2) Cwaninga ngezinto, izindlela namamodeli wezibalo ezithinta umphumela wokwelashwa kanye nokufiphala kwe-membrane, hlola izimo zokusebenza ezifanele bese usebenza amapharamitha, unciphise ukuqina kokulinganisa ngangokunokwenzeka, futhi uthuthukise umthamo wokulungisa nokusebenza kokuqina kwamamojula we-membrane;
(3) Nweba isilinganiso sohlelo lokusebenza lwe-MBR. Into yocwaningo lwe-MBR iyanda kusuka ekukhuculweni kwendle okuphuma emanzini kuya kumanzi amaningi aphilayo (amanzi amdaka wokudla, amanzi amdaka obhiya) kanye namanzi amdaka avela ezimbonini (amanzi amdaka ophethiloli, ukuphrinta nokudaya imfucuza, njll.), Kepha ukwelashwa kwamanzi amdaka asekhaya yiNkosi.
Yiziphi izici zenqubo ye-MBR?
Iqhathaniswa nobuchwepheshe bendabuko bokulapha amanzi i-biochemical technology, i-MBR inezici eziphambili ezilandelayo:
1. Ukwahlukaniswa okuqinile okuqinile koketshezi, umphumela wokuhlukanisa ungcono kunethangi lokudalwa kwendabuko, ikhwalithi yamanzi esezingeni elifanele ilungile, into esetshenzisiwe emisiwe kanye nokuqubuka komkhumbi kusondele ku-zero, kungaphinde kusetshenziswe ngokuqondile, kufezekiswa ukwenziwa kabusha komkhuzi wokukhuculula indle.
2. Umsebenzi wokuphamba osebenza kahle we-membrane uvumela ama-microorganisms ukuthi abambeke ngokuphelele ku-bioreactor, ukufezekisa ukuhlukaniswa okuphelele kwesikhathi sokuhlala se-reactor hydraulic (HRT) kanye ne-sludge age (SRT), kanye nokulawulwa kokusebenza kuyashintsha futhi kuzinze.
3. Njengombana i-MBR ihlanganisa ithangi le-aeration nethangi lokuxazulula lokukhucululwa kwendle kwendabuko libe linye, futhi lithathe indawo yazo zonke izakhiwo zokwelapha ezisezingeni eliphakeme, ingayinciphisa kakhulu indawo futhi isindise ukutshalwa kwemali kubunjiniyela bendawo.
4. Ivumeleka ekuhlukaniseni nasekukhiqizweni kabusha kwamagciwane akhiqiza i-nitrifying, uhlelo lunokusebenza kahle kwe-nitrization. Kungaba nemisebenzi yokwenza deamination and dephosphorization ngokushintsha imodi yokusebenza.
5. Njengoba iminyaka yodaka ingaba yinde kakhulu, ukusebenza kahle kokuwohloka kwezinto eziphilayo okuvuselelayo kwenziwa ngcono kakhulu.
6. I-Reiler isetshenziswa ngaphansi komthamo omkhulu wevolumu, umthwalo omncane we-sludge nobudala obude be-sludge. Umphumela osele we-sludge uphansi kakhulu. Njengoba iminyaka ye-sludge ingaba yinde isikhathi eside, emcabangweni, ukuqhuma kwe-zero sludge kungatholakala.
Okwedlule: Uyayazi inqubo yokuqalwa kwemishini yokuhlanganiswa kwe-MBR?
Okulandelayo: Ukusetshenziswa kwe-membrane bioreactor ekwelashweni kokukhucululwa kwendle esibhedlela